Posted by Tranquillus | Feb 18, 2021 | Shabakada
Adeeg cusub oo Dawladeed: Agaasimayaasha gobollada ee dhaqaalaha shaqada, shaqada iyo midnimada (DREETS)
Abriil 1, 2021, waxaa la abuuri doonaa adeeg dowladeed oo baahsan. Kuwani waa agaasimeyaasha gobollada ee dhaqaalaha shaqada, shaqada iyo midnimada (DREETS).
Kooxda DREETS waxay si wada jir ah howlgalada hada fulinayaan:
agaasimayaasha gobollada ee shirkadaha, tartanka, isticmaalka, shaqada iyo shaqada (DIRECCTE);
adeegyada baahinta ee ka masuulka ah wadajirka bulshada.
Waxay u abaabulan yihiin ulo. Waxay ku jiraan gaar ahaan tiirarka "siyaasadda shaqada", oo mas'uul ka ah siyaasadda shaqada iyo tallaabooyinka kormeerka sharciga shaqaalaha.
DREETS-ka waxaa la hoos geeyay maamulka gobolka. Si kastaba ha noqotee, howlaha la xiriira kormeerka shaqada, waxaa la hoos geeyay awoodda Agaasinka Guud ee Shaqada.
DREETS waxay abaabushaa dhammaan ilaha loo qoondeeyay nidaamka kormeerka shaqaalaha iyadoo la waafajinayo shuruudaha heshiisyada Ururka Shaqaalaha Caalamiga ah, heer gobol iyo heer waaxeed.
Marka, marka laga hadlayo sharciga shaqaalaha, DREETS-ka ayaa mas'uul ka ah:
siyaasada shaqada iyo talaabooyinka kormeerka sharciga shaqaalaha; siyaasada…
Dhamaadka DIRECCTE: laga bilaabo Abriil 1, 2021, kormeeraha shaqada waxaa la hoos geeyay awoodda DREETS July 10th, 2021Tranquillus
horeMaamulaha Suuqgeynta ee ka qalin jabiyay IFOCOP, wuxuu siiyaa dhiirigelin mashruuciisa tababarka xirfadeed
socdaMiyaan xaq u leeyahay in la eryo, sabab dhab ah oo culus, shaqaale hadda aabe noqday?